Rojo Dutasteride roah (164656-23-9) mpanamboatra - Phcoker
Rojo dutasteride roah (164656-23-9)
Ny vovoka Dutasteride dia fanafody voalohany ampiasaina amin'ny fikarakarana ny soritr'aretin'ny prostate lava lehibe. Misy hormonina ...
SKU: 164656-23-9 Sokajy: Sex Hormone
Rano Dutasteride roah (164656-23-9) video
Ny vovoka Dutasteride roah dia fihenan'ny 5α-reductase, izay ilaina amin'ny soritr'aretin'ny hyperplasia tsara tarehy (BPH); izay antsoina hoe "prostate enlarged" ary avy eo dia karazana antandrogen. Ny vovon-tsakafo roapolo dia miasa amin'ny fihenan'ny famokarana dihydrotestosterone (DHT), hormone androgen, ao amin'ny faritra sasany amin'ny vatana toy ny tratran'ny prostate sy ny hoditra. Izany dia mampihena telo ampy 5α-reductase, ary mety hampihena ny DHT sehatra ao amin'ny ra ny hatramin'ny 98%.
Vovon-tsakafo roapolo (164656-23-9) Specifications
Product Name Vovonam-bovoka roapolo
Anarana simika GG-745;GI-198745;GI-198745X; N-[2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxo-4-aza-5α-androst-1-ene-17β-carboxamide
Drug Class 5α-Reductase inhibitor
molekiolan'ny Formula C27H30F6N2O2
molekiolan'ny Wvalo 528.53
Monoisotopic Mass 528.221 g / mol
mitsonika Point 242-250 ° C
Freezing Point Tsy misy angon-drakitra
Ny antsasaky ny biolojia 4 ho 5 herinandro
Color fotsy beige
Solubility Azo alaina amin'ny ethanol (44mg / ml), methanol (64mg / ml), polyethylene glycol 400 (3mg / ml) ary DMSO (62 mg / ml amin'ny 25 ° C 117mM). Tsy voapoizina anaty rano
Application Ny fitsaboana ny Prostate an-kibo, ny volo eo amin'ny lahy sy ny vavy ary ny fitomboan'ny volo amin'ny vehivavy, ary ny ampahany amin'ny fitsaboana hormone ho an'ny vehivavy mpandihy
Rojo Dutasteride roah (164656-23-9) Description
Ny vovoka Dutasteride dia fanafody fitsaboana. Izy io dia tsy misy afa-tsy ny kapoakany.
Ny poety Dutasteride dia misy ny Avodart mahazatra. Misy ihany koa ny fitsaboana mahazatra. Ny medikaly ankapobeny dia mitaky latsa-danja noho ny dikan-teny marika. Amin'ny toe-javatra sasany, ny famokarana marika sy ny dika mitovy dia mety amin'ny endrika sy hery samihafa.
Azo ampiasaina amin'ny fitsaboana miaraka ny fitsaboana amin'ny dutasteride. Midika izany fa mila mitondra izany amin'ny zava-mahadomelina hafa ianao.
Dutasteride vovoka (164656-23-9) Mechanism of Action
Ny dutasteride dia anisan'ny kilasin'ny zava-mahadomelina antsoina hoe inhibitors alpha-reductase 5. Ny karazana fanafody dia vondrona fanafody izay miasa amin'ny fomba mitovy. Matetika ireny fanafody ireny no ampiasaina hanehoana toe-javatra toy izany.
Misy hormonina ao amin'ny ranao antsoina hoe dihydrotestoterone (DHT) izay mahatonga ny prostateo hitombo. Mampidi-doza ny famolavolana ny DHT ao amin'ny vatanao, ka mahatonga ny prostate lava mitombo.
Fampiharana ny vovoka Dutasteride (164656-23-9)
Ny vovoka Dutasteride dia ampiasaina amin'ny lehilahy mba hikarakarana ny soritr'aretin'ny prostate lava (bent prostatique-BPH). Izany dia miasa amin'ny fampihenana ny haben'ny prostate lava. Izany dia manampy amin'ny fanalefahana ny soritr'aretin'ny BPH toy ny fahasarotana amin'ny fanombohana ny fatran'ny riaka, ny rano malemy, ary ny ilàna fanosehana matetika na maika (anisan'izany mandritra ny misasak'alina). Mety hampihena ny fikarakarana ny fandidiana BPH koa izany.
Tsy voatsabo ny vovoka Dutasteride mba hisorohana ny homamiadan'ny prostate. Mety hampitombo ny mety hisian'ny homamiadan'ny prostate tena izy io. Miresaha amin'ny dokotera momba ny tombontsoa sy ny loza mety hitranga.
Vovon-tsakafo voarindra (164656-23-9) Dosage
0.5 mg oral indray mandeha isan'andro
Fampiasana: Ny fitsaboana ny hyperplasia tsara tarehy prostatika (BPH) amin'ny lehilahy miaraka amin'ny prostate lava lehibe kokoa mba hampihenana ny mety ho fisorohana ny aretin-tsaina miverimberina (AUR) sy ny fandidiana BPH.
Ny voka-dratsin'ny vovoka Dutasteride (164656-23-9)
Mitadiava fanampiana ara-pahasalamana raha misy marika mampihetsi-po (hives, fofona miaina, mitebiteby eo amin'ny tarehinao na tenda) na fihetseham-po mahery vaika (tazo, tenda malemy, maso mirehitra, fanaintainan'ny hoditra, hoditra mena na volomparasy amin'ny hoditra sy peeling).
mihena libido (firaisana ara-nofo);
Nihena ny sombin-tany navoaka nandritra ny firaisana ara-nofo;
ny tsy fahampian-tsakafo (manelingelina na mitazona fananganana); na
ny fitiavam-bavy na ny fanitarana.
Ny vokatry ny firaisana ara-nofo amin'ny dipoavatra dipoavatra dia mety mitohy rehefa ajanonao ny fakana dipoavatra dipoavatra. Miresaha amin'ny dokotera raha manana olana mikasika ireo fiantraikany ireo ianao.
Row Yohimbine HCL poopy (65-19-0)
Ny vovony Yohimbine hydrochloride dia menaka ahitra izay ampiasaina hitsaboana fatiantoka ary mampiroborobo ny lanjany …….
Roap Dapoxetine HCL poids (129938-20-1)
Roap Dapoxetine Poids hydrochloride, a new antidepressant, has been found safe and effective for the treatment of ......
fahafahana: 1476kg / volana
Raw Tadalafil vovoka (171596-29-5)
Ny vovony Tadalafil Raw miaraka amin'ny anaran'i Cialis dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny tsy fahampiana (impotence) ary ny soritr'aretin'ny benign prostatic ……….
Rohamena Yohimbine (146-48-5)
Ny vovony Raw Yohimbine dia fanampin-javatra fantatra amin'ny fahaizany mikarakara fatiantoka ary manampy amin'ny fihenan-danja.Yohimbine dia miasa amin'ny alàlan'ny fampitomboana…